အေးချမ်းတဲ့ အမေ့အိမ် ။ ဝေးတနေရာက အမေ့အိမ် ။ အရာအားလုံး အဆင်ပြေ ၊ ပူပင်ကြောင့်ကျ ကင်းရှင်းစွာ နဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာ နေခဲ့ရတဲ့ အမေ့အိမ် ။ ဝေးဝေးနေမှ တမ်းတ နေမိတဲ့ အမေ့အိမ် ။ အားငယ်စိတ်တွေ ၊ အဆင်မပြေ မှုတွေ တွေ့ ကြုံ ရ တော့မှ အားကိုးတကြီး မျှော်လင့် ခြင်းများစွာ နဲ့အပြေး ပြန်လာချင်တဲ့ အမေ့အိမ် ။ တနေ့ နေ့ တော့ ပြန်ရမယ် လို့အားတင်းပြီး ကျရောက်လာသမျှ ဒုက္ခတွေကို ခါးစည်းခံကာ ရှေ့ ဆက်လျှောက်ဖို့အားအင်သစ်တွေ ပေးခဲ့တဲ့ အမေ့အိမ် ။ အမေ့အိမ်သို့ပြန်ရတော့မည် ။ ဒီတော့ ဒီနေရာ မှာ ကိုယ့်ချစ်သူကို ထားခဲ့ရပါတော့မည် ။
( ဤစာပိုဒ်လေးအား ဖတ်နေစဉ် သီချင်းဖွင့်နားထောင်နိုင်ပါသည် ။ ချစ်သူအတွက် ကိုယ့်အကြိုက် သီချင်းလေးတပုဒ် ထားခဲ့ပေးပါသည် ။ ဖိုင်းယားဖေါက်စ် နဲ့ ဒီပို့ စ် ဖွင့်မှ အဆင်ပြေမည် ထင်ပါသည် )
အချိန်တန်တော့ အိမ်ပြန်ရမှာပေါ့ ဆိုတဲ့ စကား လက်ကိုင်ထားပြီး ၊ တရွေ့ ရွေ့ ကုန်ဆုံးနေတဲ့ ပစ္စုပ္ပန် အချိန်များမှာ ရုန်းရင်းကန်ရင်းနဲ့ ပဲ အတိတ်ကို အရိပ်တွေလို ချန်ထားခဲ့ရပေပြီ ။ ၊ ဘဝ ဒုက္ခဝဲဂယက်ထဲ အချိန်အတော်ကြာအောင် တဝဲလည်လည် နဲ့ပေါ်ချည် မြှုတ်ချည် လူးလာဆန်ခတ်ကူးခတ်နေရခြင်းမှာ ခြေကုန်လက်ပန်းလည်းကျ ၊ စိတ် ရော ကိုယ်မှာပါ ဒါဏ်ရာဗလပွ နဲ့၊အောင့် သက် ကို မြှင်းမြှင်းရှူပါလို့အိမ်အပြန်လမ်းကို လျှောက်လှမ်းရပါတော့မည် ။
လူ့ စိတ် ဆိုသည်မှာလည်း ခက်လှပါဘိ ။ ရတာ မလို ၊ လိုတာ မရ ။ခုလိုအိမ် ပြန်ရတော့မည် ဆိုတော့လည်း နောက်ဆံတငင်ငင် ဖြစ်မိရပါသေးသည်မို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပင် အားမလို အားမရ နှင့် စမ်းစစ်မိလိုက်ပါသည်။သည်တော့လည်း ကိုယ့်ချစ်သူ သူ့ အကြောင်းကို ချန်လှပ်ထား၍ မဖြစ်တော့ပြီ ။
တကိုယ်တည်းအနေကြာလာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ဤတိုင်းပြည်ဝယ် ရောက်ကာစအချိန်မှာ လို အားငယ် စိတ်ပျက်ခြင်းများ အလွန်အကျွံမရှိခဲ့တော့သည်မှာ အမှန်ပင် ။နေ့ စဉ် လုပ်နေကြ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို စက်ရုပ်တရုပ်သဖွယ် လုပ်ကိုင်နေကြရသော ဤပတ်ဝန်းကျင်မှ လူအများ နည်းတူ ၊ ပုံမှန် အလုပ်တက်ဆင်း ရင်းဖြင့် ကိုယ့် အချိန်များကို ကုန်လွန်စေခဲ့ရသည် ။ စနေ တနင်္ဂနွေ လို အားလပ်ရက်များတွေမှာ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းအနည်းငယ်နှင့် ဟိုဟို သည်သည် သွားလာ လည်ပတ်ရင်း ၊ စားသောက်ကြရင်း ၊ ဖြင့်လည်း ပျော်ရွှင်ဘွယ်ရာ အချိန်များ ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ကြသည် ။ သူ တို့လူမျိုး များ၏ စကားပုံ အဆိုအရ “ ပျော်လျှက်နဲ့ လည်း ဒီတရက်ကို ဖြတ်သန်းရတယ် ။ ဝမ်းနည်းလျှက် နဲ့လည်း ဒီတရက်ကို ဖြတ်သန်းရတာမို့ဒီအချိန်တွေကို ပျော်ရွှင်စွာ နဲ့ ပဲ ဖြတ်သန်းကြပါစို့ ” ဆိုကြသည်။
လူဆိုသည်မှာ ငြီးငွေ့ လွယ်သော သတ္တဝါ တမျိုး ဟု ကိုယ်ယူဆထားခဲ့သည် ။ အကြောင်းမှာတော့ တိုးတက်ပြီးသော နိုင်ငံ အတော်များများမှာ ရုပ်ဝတ္တု ပစ္စည်းများ အဟောသိကံ ဖြစ်လေ့ရှိကြသည် ။ ယနေ့ မှာ အသစ်ဖြစ် ၊ အသစ်ထွက်ရှိသော ပစ္စည်း တခု မှာ မနက်ဖြန် အတွက် အဟောင်းတခု အနေနဲ့ရှိကြရတော့မည်မှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်ပေသည် ။ သို့အတွက် အသစ် အသစ်တို့ နောက် လိုက်နေရင်းဖြင့် လိုက်၍ မမှီဖြစ်နေကြရသည်မှာ လည်း မထူးဆန်းသည့် သဘောတရားပင် ဖြစ်ပေသည် ။ ကြာလာတော့ ခြေကုန်လက်ပန်းကျရင်းဖြင့် စိတ်ပျက်မိတတ် ပေတော့သည် ။ ဤအရာများသည် ကိုယ့်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်များမဟုတ် ဆိုသည်ကို နားလည်လာမိသည်။
ဒီလို အချိန်မှာ အပေါင်းအသင်းတချို့ ၏ မိတ်ဆက် ပေးမှုဖြင့် သူ နှင့် စတင် သိကျွမ်းခဲ့ရပေသည် ။၂၀၀၇ ခုနှစ်ရဲ့ဧပြီလ အတွင်းတွင် ဖြစ်ပါသည် ။ စစချင်းတော့ သူ့ ကို ဘယ်လို မှ ခင်မင် ပေါင်းသင်း မိလို့မရ ။ ရင်းနှီးမှု မရှိသေးသဖြင့် ခပ်တန်းတန်း မေးထူးခေါ်ပြော အဆင့်မှာ ပင် အတန်ကြာနေမိခဲ့သည်လေ ။ သူကလည်း မာနကြီး တခွဲသားနှင့် မို့တခါတရံတွင် တယောက်နှင့်တယောက် ပြောဆိုနေရင်းဖြင့် အခန့် မသင့် ၊စိတ်ဆိုး စိတ်တို မိသည့် အကြိမ်ပေါင်းလည်း မနည်းတော့ပါ ၊ သူကလည်း သူပေပဲ ။ မကြာခဏ ဆိုသလို မျက်နှာ အပြောင်းအလဲ မြန်လွန်းလှသည် ။ အရောင်အမျိ်ုးမျိုးဆိုးတတ်သည် ။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာလည်း ကိုယ့်ထက်သာလွန်သဖြင့် ချစ်သူ ခင်သူပေါလှသည် ။ ရောက်ရာ အရပ်မှာ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း ဖွဲ့ တတ်သည်။ မာကြောင်း သာကြောင်း များ အပြင် အလ္လာပ သလ္လာပ များ လည်း ပြောမဆုံးပေါင် တော့ သုံးထောင် မို့၊ သူ့ မျက်နှာမှာ အမြဲ တက်ကြွ လန်းဆန်း နေခဲ့ သည် ။
ဒီလို နဲ့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် အချိန်နဲ့တင် တနှစ်ကျော်မျှကြာသွားခဲ့သည် ။တကယ့်ကို တစိမ်းပြင်ပြင် နေခဲ့ကြသည် ။တရက်မှာတော့ အလုပ် ထဲမှ အဆင် မပြေမှု တွေကြောင့် ကိုယ့်စိတ်တွေ အတော်လေး ထွေနေခဲ့ရာမှ မိတ်ဆွေတယောက်အိမ် အသွားမှာ သူ့ ကို အမှတ်မထင် ပြန်ဆုံတွေ့ ခဲ့မိသည် ။မှတ်မှတ်ရရ (၂၀၀၈ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက် ) နေ့ မှာ ဖြစ်ပါသည် ။ သူ့ မျက်နှာ ကို ကိုယ်စာဖတ်ကြည့်တော့ သူ့စိတ်သဘောထား မဆိုးလှကြောင်း ထင်မိလေသည် ။ ဒီလို နဲ့ သူတလှည့်ကိုယ်တလှည့် အပြန်အလှန် စကားဖလှယ် မိကြသည် ၊ ရယ်စရာ များ အကြောင်း ပြောမိလျှင်လည်း သူကလေးတယောက်လို့အားရပါးရ တဟားဟား ရယ်တတ်လေသည်၊ သူ့ အပျော်အား ကိုယ့်အပေါ်ကူးစက်စေသည် ။ ထိုအချိန်မှာ ကိုယ်တယောက်သူရဲ့အေး မြ နေတဲ့ မျက်နှာကြည်ပပ လေးကို ငေးကြည့်နေမိတတ်သည်။ အလွမ်း အဆွေးကြိုက်သောကိုယ်တယောက် စာတိုပေစ အလွမ်းစာ ကဗျာတွေ၊ အနှောက်အသွားမလွတ်သော စာတွေ မတတ်တခေါက် ရေးစပ်နေရင်လည်း သူ မျက်လုံး ရီဝေဝေ နဲ့ ကိုယ့်မျက်နှာကို ငေးကြည့်ရင်း သက်ပြင်း မျှင်းမျှင်း ချတတ်လေသည်။
အလုပ်အားရက် များတွင် ခါတိုင်းလို အပြင်ထွက် ၊ ဈေးပတ် ၊ ပေါက်ကရ လျှောက်ဝယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်လိုစိတ်အလျဉ်း မရှိတော့။ အာရုဏ်တက် မနက် မနက်ပေါင်းများစွာမှာ ကိုယ်နိုးထ ချိန်တိုင်း သူ့ ကို ဦးဆုံးသတိရမိသည်။ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြင့် နှုတ်ဆက်လေ့ရှိသည်။ အချိန်ရလျှင် စကားဖေါင်ဖွဲ့ လေ့ရှိသည် ၊ ကိုယ့်အရေး သူ့အရေး ၊အလ္လာပ သလ္လာပ မှ အစ လုမှုရေး ၊ တိုင်းရေးပြည်ရေး အဆုံး ရောက်တတ်ရာရာ ပြောဆိုရသည်မှာလည်း မမောနိုင် မပန်းနိုင် ၊ အတောမသတ်နိုင်သည် မို့အလုပ်ချိန်နောက်ကျတတ်သည် များလည်း ရှိတတ်သေးသည် ။ ဒါကို ရိပ်မိလေသည်လားမသိ ၊ဤလို အချိန်မျိုးတွင် ချစ်သူက ကိုယ့်အတွက် ငဲ့ညှာပြီး မပြောမဆိုနှင့် စကားစ ဖြတ်သွားတတ်သည် ။ ကိုယ့်မှာတော့ သူ့ ကို တန်းတန်းစွဲ မခွဲနိုင် မခွာရက်မို့၊ဤသို့တုံးတိတိ အဆက်ဖြတ်လိုက်သည့် နေ့ များတွင် လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ထိ စိတ်အလိုမကျ ဖြစ်တတ်မိသေးသည် ။ ဪ .. သံယောဇဉ်တွယ်မိတော့ လည်း အတက်အကျ ၊ နိမ့်လိုက် မြင့်လိုက် ၊ ရင်ထဲ ဖိုလှိုက် ၊ အေးကနဲ ၊ နွေးကနဲ ဖြင့် ချားရဟတ်ကြီးစီးရသည့်နှယ် ခံစားချက် မျိုးစုံကို တပြိုင်နက် ပေးနိုင်စွမ်းသော ကိုယ့်ချစ်သူ ပါတကား ။
ကိုယ်နဲ့ သူ ၊ တရားဝင်ချစ်သူတွေဖြစ်လာကြပြီးနောက် မိတ်ဆွေများသော ချစ်သူရဲ့ ကောင်းမှုဖြင့် ကိုယ့်အတွက် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ တိုးပွားလာခဲ့သည် ဆိုတာကိုတော့ ငြင်းဆိုမရ ။ ပျင်းရိဘွယ်ရာ ခြောက်သွေ့ လှသော ကိုယ့်ဘဝမှ သူ့ ကြောင့် စိုပြေသာယာ လာခဲ့ ရသည် ။ ထမင်းစားချိန် ရသမျှ အချိန်တိုလေး အတွင်းမှာ ပင် ၊ ချစ်သူ နှင့် မခွဲနိုင် မခွာရက် ၊ သူ့ မျက်နှာလေး ကို ကိုယ် အရိပ်တကြည့်ကြည့်နေလာခဲ့သည် ။ သူ့အဝတ်အစား အပြင်အဆင် မှ အစ ၊ သူ နှင့် လိုက်ဖက်မည့် ဒီဇိုင်း ပုံစံသစ် အဆောင်အယောင် များကို ကိုယ်ဂရုတစိုက် ရွေးချယ်ဆင်မြန်း ပေးတတ်သည် ။ သူ့ အပေါင်းအသင်းများ အလည်တွင် သူ့ ကို မျက်နှာမငယ်စေချင်လှပါ ။ သူ့ မျက်နှာတော် ညှိုးနေလျှင် ကိုယ်မနေတတ် မထိုင်တတ် ဖြစ်ရသည် ။ ကိုယ့်ဘဝမှာ သူသာလျှင် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာပေတော့သည် ။ ဂဂျီဂဂျောင်ကျတတ်သော သူ့ အတွက် တခါတရံတွင် ကိုယ်စိတ်ပျက်မိသော်လည်း ချစ်လွန်း၍ အပြစ်မတင်မိပါလေ ။ ငယ်စဉ်ကတည်းက အိမ်သားများနှင့် အပေါင်းအသင်းများအပေါ်တွင် စိတ်မရှည်တတ်သော ကိုယ်တယောက် သူ နှင့်ကျမှ စိတ်ရှည်သည်မှာ နှစ်ပြန်မက ။ စကားအပြောအဆိုမှာလည်း အေးဆေးနူးညံ့လာခဲ့သည် ။ အချစ်သည် အရာရာကို ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိပေတော့သည်။
ပျော်စရာ အချိန်လေးများသည် ရယ်ကာ မောကာ ပြုံးရွှင်စွာ ဖြင့် အကုန်လွယ်လွန်းလှပေသည်။ တွေ့ ကြုံ ဆုံကွဲ ဖြစ်မြဲ ဓမ္မတာ ဆိုသည့် သင်္ခါရတရားသဘောကို နားလည် ပေမင့် တမင်ဥပက္ခာပြုထား မိသည့် ကိုယ့်အား အချိန်တန်တော့ အိမ်ပြန်ဖို့အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံ မြည်လာတော့သည် ။ မသိကျိုးကျွန်ပြုပြီး အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေမိသေးသည် ။ ဒါပေမဲ့ ကျေးဇူးတရားကို သိတတ်နားလည်ဖို့ ရင်ထဲက အသိတရားတွေကတော့ နိုးကြားနေတော့ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ ကိုယ့်ကို နှိုးရ မခက် လှကြောင်း ကိုယ်တိုင် သိလိုက်မိသည် ။
မတတ်သာလို့ခပ်ခွာခွာ နေရတော့ပေမဲ့ မုန်းလို့ တော့ မဟုတ်ဖူး ဆို တာ ကို ကိုယ့်ချစ်သူတယောက် နားလည်ပေးစေချင်ပါသည် ။ တခဏ ခွဲခွာရခြင်းလား သို့ မဟုတ် ထာဝရ ခွဲခွာရခြင်းလား ဆိုတာ ကိုယ်သေချာ မသိသေးပေမဲ့ ကိုယ် သူ့ ကို အသည်းထဲ ထိ စွဲမြဲစွာ ချစ်နေမည်ဆိုတာကိုတော့ သူတယောက် သိစေချင်ပါသည် ။ကိုယ့်ရဲ့ ပျင်းရိငြီးငွေ့ ဘွယ်ရာ အချိန်လေးများကို ပျော်ရွှင်ဘွယ်များအဖြစ် ပြုစား ပေးနိုင်ခဲ့သော ချစ်သူနှင့် သူ့အပေါင်းအသင်းများ အားလုံး ကို ကိုယ့် တစ်သက်တာ ဘဝမှာ မေ့နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါလေ ။ ကိုယ်နဲ့ အနေဝေးပြီး အထီးကျန်နေခဲ့မည့် ကိုယ့်ချစ်သူအား ကိုယ်တို့ ၏ အပေါင်းအသင်းများက ဆက်လက် အားပေး ဖေးကူပေးကြလိမ့်မည် ဟု မျှော်လင့် နေမိပါသည် ။
ကံမကုန်ကြသေးရင်တော့ တချိန်ချိန်မှာ ကိုယ်တို့ပျော်ရွှင်စွာ ပြန်လည်တွေ့ ဆုံရဖို့မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ချစ်သူရယ် ။
ကိုယ့်ချစ်သူ ... သူ့ အကြောင်း ကို သိလိုပါက အောက်ပါလိပ်စာ တွင် စုံစမ်းနိုင်ပါသည် ။ ချစ်မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများကိုလည်း ထာဝရ ကျေးဇူးတင်နေပါသည် ။
:kiki : at 6/23/2010 09:00:00 PM
သင်္ကြန်ပြီးလို့မိုးဦးကျရာသီ ရောက်နေပေမဲ့ မိုးလေး တပြိုက်တလေမှ မရွာသေး ။ နွေရဲ့အရှိန်နဲ့ နေမင်းကြီးက အစွမ်းကုန်ပါဝါ ပြကာ အညှိုးတကြီး ဆက်လက်တောက်ပ လို့ နေသေးတော့ ရွှေပြည်ကြီးမှ လူနပ်(နတ်ကို စော်ကားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း) ၊သတ္တဝါ အပေါင်းတို့လောက ငရဲ အိုးထဲ အခြောက် လှော် သလို အလှော်ခံ နေရဆဲပါလေ ။ အောင်နက်ကြီး နဲ့ ဂုတ်ကျားမ တို့ ရဲ့ ခွန်နှစ်ဆောင်ပြိုင် မဟာကွိုင် အိမ်ဂေဟာကြီးမှာ လည်း အများ နဲ့့ အတူ နေပူပူ ကို အာခံပြု နေကြလေသည် ။ တော်သလင်းလ မတိုင်မီ စစ်ခင်းနေကြသော ခွေးတို့ ခေတ်မှာ မို့ရာသီဥတု ကြီးကလည်း ဖေါက်လွဲ ဖေါက်ပြန် ဖြစ်နေလေတာလား မပြောတတ် ၊ ရွှေဂုံ မြို့ ပျက်ကြီးမှာ အပူချိန်က တသက် နဲ့ တကိုယ် မကြုံ ဘူး လောက်အောင် ၊စံချိန်တင် ရလောက်အောင်ပင် ပူပြင်းလှ ပေတော့သည် ။ ဦးနှောက်တွေ ဆူဝေ မတတ် အပူလှိုင်းကျ နေတော့ ၊ အောင်နက်ခမျာ လည်း တအီအီ နဲ့ ငြီးတွားနေရရှာသည် ။
“ပူလိုက်တာ ကွာ အဲယားကွန်းလေး ဖွင့်စမ်းပါအုံး မိန်းမ ရယ် ။”
“ အံမယ် ရှင်က ဘာအခုမှ ပူသလေး ဘာလေး နဲ့ ကြီးကျယ် နေလိုက်တာ ၊ အရင် အမှိုက်ပုံ တိုးစားခဲ့ရတုံးက ဘယ်လို နေခဲ့ ရသလည်း ၊ မေ့ နေ ပြီလား ။”
“ဟ ..အရင်က အရင် ။ အခုက အခု ပဲ ကွ ။ ခု ငါ အကြံကောင်းတော့ တချက် ၊အဖန်ကောင်းတော့ တသက် ။မင်းတို့ ကို လူလို သူလို ..အဲ့လေ ။ ခွေးလို ဂေးလို အမွှေးတပြောင်ပြောင်ထားနိုင်နေပြီ မဟုတ်လား ။အတိတ်က ဝဲစွဲ အမှိုက် ထဲ တိုးစားရတာ တွေလာပြောမနေစမ်းပါ နဲ့ ၊ ကျက်သရေ တုံး လွန်း လို့ ပါ ကွာ ။”
“ ဟုတ်ပါသတဲ့တော် ။ ရှင့် ကြံရည် ဖန်ရည် လေးကြောင့် ပဲ ကျုပ်တို့မှာ အရှင်မွေးတော့ နေ့ ချင်း ။ ခွေးကတက် ပေါ်ကနေ ဒီမဟာကွိုင် တိုက်ပေါ်တက်နေနိုင်တာပါပဲ။ နောက်နှစ်ဆို ရှင့် ဆရာ လက်ကျန်လေး ပရာဒို တက်နှိပ် နိုင် အောင် လုပ်စမ်းပါအုံး ။လေစိုက်ပြီး ဝါးရင်းတုတ် တချောင်းပဲ ရင်းရနှီးရတာ လေ ”
“ကဲ ။အဲ့ဒါတွေ အသာထား ပါအုံး ၊ ခု ဘယ့်နှယ် နွေရာသီ မပြီးသေးဘူးလား ။ အိုက်ချက်က ၊ အဲယားကွန်းတောင် မနိုင် ဘူး ။”
“ ဘယ်က မနိုင်ရ မတုံး ။ မနေ့ က မှ၊ ရှင့် လာဖါးတဲ့ ဟို အနှိပ်ခန်းက ခွေး သူဌေး ဦးပေါ်ပင် ပေးထားတဲ့ဟီတာချီ အသစ်စက်စက်ကြီး တပ်ထားတာ။ ခု အိုက်နေတာ က မီး မလာလို့ ရှင့် ၊ မီးမလာတော့ ရှင့် အဲယားကွန်းကြီးက ဘယ်လို ဖွင့်မတုံး ။”
“ ဟေ ။ ငါ နဲ ငါ့ ဆရာတို့ဒီလောက်သေသေချာချာ အာမဘန္တေခံထားပြီး ၂၄ နာရီ မီးလာစေရမယ် ပြောထား ရက်သား နဲ့ ၊ ဒီမီးက ဘယ်လို ဖြစ်ရတာ တုံး ။”
“ ရှင်တို့ ဟာ ရှင်တို့အခြေအမြစ် မရှိ အာမတွေ ခံထား တာ နဲ့ ဒီ မီးကြီးက လာ ရ ရောလား ရှင့် ။ရှင်တို့ရေကာတာ ကြီးတွေ ဟို နေရာဆောက် ဒီ နေရာဆောက် ဆိုတာတွေကလည်း ကျုပ်တို့ သုံးရအောင် ပေးမဲ့မီးတွေ ဟုတ်လို့ လား ။”
“ အေးလကွာ ၊ ဆီအပင်မသာက ငါ့ဆရာ ဟို ကြောင်ထိန်းပျင်း ကြီး ကိုယ်တိုင် အာဘောင်အာရင်းသန်သန် နဲ့ ဆွယ်နေ .အဲ့လေ ..ပြောနေ မှတော့ ငါ လည်း တကယ် ထင် နေတာ ပေါ့ဟ ။ နေစမ်းပါအုံး သူ့ အိမ်ကျ မီးမပျက်ပါလား ။”
ကြံ့ တဖြစ်လဲ ခွေးအောင်နက် တကောင် တဖက်က ငြီးတွားရင်း ၊ တဖက်က ၅၀၀၀ တန် တအုပ်ကို ယပ်တောင်လို လုပ်ကာ တဖြတ်ဖြတ်ခါနေတော့သည် ။
ထိုစဉ်အခါ အိမ်ရှေ့ မှ ခွေးတသိုက် တအီးအီးအော်ဟစ်ငိုကြွေးပြီး ကြေးစည်ထုသူ ထု ၊သတိလစ်နေသူကို နှာနှပ်သူနှာနှပ် နဲ့ ထမ်းစဉ်လေးတခု ထမ်းကာ ထွက်သွားကြသည်ကို လှမ်းမြင်လိုက်ရလေသည် ။ သူ့ မဟေသီ ဂုတ်ကျား မ ကို မေးကြည့်တော့ အရှေ့ ခေါင်းရင်း အိမ်မှ ခွေးသားအလတ် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် နဲ့အပူရှပ် ပြီးရုတ်တရက် သွေးကြောပြတ်ကာ ဆုံးသွားကြောင်း ၊ ရပ်ကွက်ထဲ နာရေးကူညီ အသင်းကား ကို ပေးမဝင်သည့် အတွက် ရပ်ကွက် ပြင်ထိအောင် ထမ်းစဉ် နဲ့ထမ်းထုတ်သွားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြလေသည်။
“ ဪ ။ ဟုတ်ပေသားပဲ ။ သူအခုမှ သတိရ မိသည် ။ ဒီလို နာရေး ကိစ္စများကို သူနဲ့ မဆိုင် သလို ထားမိတာ ကြာ ပြီ ပဲ ။ စားဖို့ သောက်ဖို့အကြံ အဖန်ရတဲ့ မှတ်ပုံတင် လုပ်တဲ့ ကိစ္စ များ ။ မဲဆွယ်ခြင်းများ၊ အဲ့လေ.. ဝဲဆွယ်ခြင်များ ကိုသာ သူ့အလုပ် လို့သတ်မှတ်ထား မိတဲ့ အောင်နက်တကောင် ခုတော့ အရပ်ထဲ မှာ အော်ဂလီဆန် အတန်းအစား တရပ် အနေနဲ့ တံတွေးခွက် မှောက်ရက်ရော ပက်လက်ပါ မျော နေရတာ ကြာ ခဲ့ပြီပဲလေ။ သို့ ပေမဲ့ သူမမှုပါ ။ စားရ ဝါးရဖို့ က ပို အရေးကြီးသည် မဟုတ်ပါလား ။ နောက်ထပ် ဝါးရဖို့အချိန်တွေ သိပ်မကျန်လှတော့ လို့သူတို့အားလုံး နားလည်ပြီးသားမို့အချိန်ရှိခိုက် လုံ့ လစိုက် ကာ ၊သားကျွေးမှု မယားကျွေးမှု ခယ်မ ကျွေးမှု တွေ အတွက် မိုက်လုံးဆက်ကြီး နေရပါအုံးမည် လေ။
ခုတလော အပူချိန်ကြီးလွန်း၍ အရပ်ထဲ မှာ ရေပြတ်လပ်နေကြလို့အရပ်သားတွေ ဒုက္ခ ရောက်နေကြတာ ။ မူးလဲ သူ တွေ ၊ ဆေးရုံ ရောက်သူတွေ လည်း ဒုနဲ့ ဒေး ။ အောင်နက် တို့တမိသားစုကတော့ ဆရာ့ အားကိုး နဲ့ရေမပြတ် ၊တော့ ကျေနပ်နေလိုက်သေးသည် ။ ဘယ်သူသေသေ အောင်နက်တို့ က မာနေသေးသည်လေ ။ အရပ်သားတွေ အတွက် ပြင်ပ မှ လာသော ရေ အလှူရှင်များ ကိုတောင် သွားပြီး နှောက်ယှက်နေလိုက်သေးသည် ။ ဒီတော့လည်း အရပ်က အော့ကျောလန်တာ အဆန်းမဟုတ်တော့ပြီပေါ့ ။
“ အောင်မလေးးးး ကိုအောင်နက်ရဲ့. ဒီကို မြန်မြန်လာစမ်းပါအုံး တော့ ၊ ရှင့်သားလေး ဒီမယ် .. ဘာဖြစ်နေလည်း မသိ ၊ လုပ်ကြပါအုံး..... ”
ဂုတ်ကျားမရဲ့အထိတ်တလန့်အော်ဟစ်သံကြောင့် အတွေးနဲ့ နှပ်နေတဲ့ အောင်နက်တကောင် ပက်လက်ကုလားထိုင်မှ ဝုန်းကနဲ ထကာ သူ့ သားတော်မောင် မိုက်ခဲ လပြည့် ရှိရာ အပြေးတပိုင်း လာကြည့်စဉ် လုပ်ငန်းရှင်တွေဆီက ဖြုတ်သိမ်းထားတဲ့ပါဝါမီတာဘောက်စ် များ နဲ့ခလုပ်တိုက် ကာ မှောက်ရက်လဲတော့ သည် ။ မခိုင့်တခိုင် ပုဆိုးစိမ်းက လျှောကနဲ အကျွတ် ပေမဲ့ သားဇော နဲ့မို့ ဂရု မထား နိုင် လေဘူးပေါ့ ။
သူ့ သားအခန်းအရောက် မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် သူ့ဦးခေါင်းတခုလုံး အိုးထိန်းစက်လို ချာချာလည် သွားလေတော့သည် ။ ချစ်မငြီးတဲ့ သားတော်မောင်လေး တကောင် ပါးစပ်မှာ အမြှုပ်တစီစီ နဲ့၊ တကိုယ်လုံး ဖွေးဖွေးစွတ်ကာ သွေးဆုပ်လျှက်ရှိနေပေပြီ ။ နဖူးနဲ့ကိုယ်လုံး ကို စမ်းကြည့်လိုက်တော့ မီးခဲ လို ပူခြစ်တောက်နေသေးသည် ။ အခြေအနေမဟန် မှန်းသိတော့ ဆေးရုံသို့ကမန်းကတမ်း ပို့ ဖို့ လုပ်ရလေသည် ။ ရပ်ကွက်ထဲမှ ခွေးအများက အံ့သြခြင်းကြီးစွာ ရော ၊ ပြုံးစိစိ နဲ့ရော အကြည့်ပေါင်း မျိုးစုံ နဲ့ ကြည့်နေကြတာ သူဂရု မစိုက်အား ။ ဆရာ့ လက်ကျ ဖွတ်စကီး ကားလေး ကို အသားကုန် မောင်းပြီး ဆေးရုံရောက်လာသည်။
ဆေးရုံမှ တာဝန်ကျ ဆရာမလေး က ပုဆိုး မကပ်တဲ့ အောင်နက်ကြီးကို ကြည့်ပြီး အမူးလွန် တဏှာရူး အရုးဖေါက်လာသည် လို့ထင်မှတ်လိုက်သေးသည် ။ နောက်မှ သတိလစ်နေသော ခွေးသူငယ် ကိုတွေ့ ရ၍ အသက်ကယ်ဖို့အလျှင်အမြန်လုပ်ဆောင်ရတော့သည် ။ တာဝန်ကျ ဆရာဝန် အဆင်သင့် ရှိနေပေလို့ တော်သေးသည်ဟု အားတက်သွားပြီး ဆရာကို ရှစ်ခိုးမတတ် ခယ တောင်းပန် အကူအညီ တောင်းနေမိသည် ။ ခါတိုင်း မောက်မာခဲ့ ပြီး သူ များဆီမှာ ခုလို ခခယယ မလုပ်မိတာ ကြာ ခဲ့ပြီပဲ ။ သားဇော နဲ့ ဆိုတော့လည်း သူ ဘာကို မျှ သတိမထား မိနိုင်ပါတော့လေ ။ သားတော်မောင်ကို အရေးပေါ်ခန်းမှာ တာဝန်ကျ ဆရာ ဆရာမ များ အသက်ကယ်နေစဉ် “ဘုရား ဘုရား ။ ကယ်တော်မူပါ အရှင်ဘုရား ...”
အောင်နက်တကောင် ဆောက်တည်ရာ မရ ၊ မရှစ်ခိုးတာကြာပြီဖြစ်သော ၊ မ တ ဖူးသောဘုရားကို ခုမှ အခါခါတ နေမိ ဆုတောင်းနေမိလေသည် ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သူ့မဟေသီ ခုမှ ပြောပြသော ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် များအရ သားတော်မောင် တကောင် မူးယစ်ဆေးဝါးအထိုးလွန် တဲ့ အပြင် ၊ အပူ ထဲမှ ပြန်လာ ပြီးပြီးချင်း ရေလောင်းချိုးမိခြင်းကြောင့် ခုလို ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်း ..ဟိုတစ ဒီတစ ...
“ဝမ်းနည်းပါတယ် ခင်ဗျာ ။ ကျွန်တော်တို့ တတ် နိုင်သလောက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဆေးရုံ ရောက်လာတဲ့အချိန်က အင်မတန်နောက်ကျ နေတာ မို့သူ့ အသက်ကို ရအောင်မကယ်နိုင် ဖြစ်သွားရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ ”
အတွေးတွေ ယောက်ယက်ခပ်နေရာမှ တာဝန်ကျ ဆရာဝန်ရဲ့ စကားသံကြောင့် သူ့ အသိတွေ ပြန်လည် စုစည်းမိလာသည် ။
အောင်မလေး သားရဲ့အဖြစ်ဆိုးလှ ချေလား ။ မင်းအဖေ ခုမှ ခွေးမွှေး ခွေးတောင် ပြောင်ကာစ ရှိသေး ၊ မင်းမှာ ခုမှ ဝအောင်လင်အောင် စားရ မယ်ကြံကာ ရှိသေး ၊ အသေစောလို့အမေနှမြောလှချေရဲ့ငါ့သားခွေးလေး မောင်လပြည့်ရဲ့..
ငိုကြီး ချက်မ နှင့် တက်သွားရှာသော ဂုပ်ကျားမ ကိုပဲ ဆွဲရ မလား ။ သူ့ ရဲ့မကပ်တော့တဲ့ ပလေကပ် စိမ်းစိမ်းကြီးကို ပဲ ဆွဲ ရ မလား နှင့် ဗျာ များနေသော အောင်နက်ကြီး ကို ကြည့်ရင်း ရပ်ခွေး ရွာခွေးများ မှာ ရယ်ရအခက် ၊ ငိုရ အခက် ရှိနေကြလေတော့သတည်း ။
သူ့ ဟာသူ နဂိုက ဝတ်လေ့ရှိသော အလုပ်သမား ဇင်ပိတ်ကြမ်း ဘောင်းဘီ ကြီး အချွတ်ကောင်း ပြီး၊ ဆရာ့ ဆရာ ကြီးတွေ နောက်လိုက်ကာ အားကျ စွာဖြင့် လိုက်ဝတ် မိတဲ့ ပုဆိုးစ တက်နင်းမိလို့အရှက်လည်းကွဲ ၊ သားတော်မောင်ရဲ့အသက်လည်း ဆုံး ၊တဲ့ အောင်နက်ကြီးလို အဖြစ်မျိုး တကယ် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလျှင် ...
( စိတ်ကူး ယဉ်ဇာတ်လမ်း တပုဒ်မျှသာ ဖြစ်ပြီး တိုက်ဆိုင်မှု များ ရှိပါက မတော် တမင် တိုက်ဆိုင် မှု များသာ ဖြစ်ပါကြောင်း ။)
:kiki : at 6/20/2010 11:00:00 PM
၅၄ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ၊
ရာဇဝင်နဲ့ အစဉ်အလာ ကြီးမြတ်လှတဲ့ ၂ထပ်အိမ်ကြီးထဲမှာ ၊
ယနေ့ ထိတိုင် အချုပ်နှောင်ခံနေရတဲ့သူက
ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကြီး ပိုင်ရှင် ။
ပြည်သူချစ်တဲ့အဖဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမီး ၊
အဖေ့ခြေရာနင်းတဲ့ အဖေ့သမီး ၊
သူ့ တိုင်းပြည် နဲ့ လူမျိုး ကို ချစ်တဲ့ ၊ သစ္စာရှိတဲ့ ၊
အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူတရပ်လုံးကချစ်တဲ့ ၊
မြန်မာပြည်ကြီး ဒီမိုကရေစီ ရရှိဖို့၊
သူ့ ဘဝကြီးတခုလုံးကို ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့၊ ပေးဆပ်နေတဲ့
တချိန်က သာယာစိုပြေ အေးချမ်းခဲ့၊
တချိန်က ရဲရဲတောက် မိန့်ခွန်းတွေချွေခဲ့ ၊
တချိန်က သောင်းသောင်းဖြဖြ လူထုတွေ စုဝေးခဲ့ ၊
ခုချိန်မတော့ သံဆူးကြိုးအထပ်ထပ်ကာရံ ၊
စစ်ခွေးတွေ အုပ်စုလိုက် ကာရံ ၊
ယက်တောလိုလူ နောက်တခါ ရေကူးဝင်လာမလား ၊
ဒါမျိုးအဖြစ် နောက်အသစ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်လေမလား၊
သူခိုးဝင်လို့ အိမ်ရှင်ထောင်ကျ ၊
ဘယ်နိုင်ငံမှ မရှိဘူး ညစ်ညူးတဲ့ ဥပဒေ နဲ့ ဖိနှိပ်လို့ ထား ။
တချိန်က ခန်းနားကြီးမြတ်လှတဲ့ ၂ထပ်အိမ်ကြီး ၊
ခုတော့ ဇရာကြောင့်လည်း ဟောင်းနွမ်းယိုင်နဲ့
သဘာဝဘေးဒါဏ်ကြောင့် ခေါင်က မိုးယို ၊
ဒါပေမဲ့ အလံမလဲ ကြံ့ ကြံ့ ခိုင် နေဆဲ ၊
မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နေထိုင်ခဲ့ရာ ၊
ဒီမိုကရေစီ အရေးတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေသူ အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေထိ်ုင်ရာ ၊
အချုပ်ခြံဝင်း လည်း ပြိုပျက်ယွင်းနေရပြီပေါ့ ၊
ချုံ နွယ် ပိတ်ပေါင်း ၊ထူထဲထဲ နဲ့ ၊ ဒီခြံမြေ ဒီစံအိမ်အား
ပြုပြင် ရှင်းလင်း ဖို့တောင် ၊ မလွယ်ပါဘူး ၊
စိတ်ဓါတ်ချင်း မိုးနဲ့မြေခြား ၊
အစ်ကို ဖြစ်သူ မယားတရူး ၊ စည်းစိမ်ရူး ကြောင့် ၊
အိမ်ပြင်စေဖို့မပြင်စေဖို့၊ ကန့်ကွက်စာတင်သွင်း ၊ပယ်ချ၊ ဆိုင်းငံ့ ..
ရှုံ့ ချည် နှပ်ချည် ၊ ပေါ်လစီမှာလည်း ထူးလှပါဘိ ၊
လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာကြီးရဲ့နေအ်ိမ်ပြင်ဖို့ 
ဘယ်ဗိသုကာ ရှင်မှ မစွမ်းဆောင် နိုင်ကြသေးသမို့ 
တို့ အားလုံး ရဲ့ အမေ ၊
ဒီ တမိုးမှာလည်း မိုးရေယို ၊ စိုလို့ များ ရွှဲနေဦးမှာ လား ၊
မိုးအေးလို့အအေးပါတ် ၊ ကျန်းမာရေးထိခိုက် နေမှာလား ၊
စိုးရိမ်စိတ် နဲ့ တွေးပူနေမိပါသေးရဲ့။
အမေ့ အသက် ၆၅ ၊ ပြည့်တဲ့ ဒီနေ့ ၊ ၂၀၁၀၊ ၁၉ ရက် ဇွန်လ မှာ ၊
တို့ အားလုံးရဲ့သတ္တိရှင် အမေ ၊
သက်တော်ရှည်၍ ကျန်းမာ ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါသည် ။
အမေ့ ဆန္ဒ လိုအင် များလည်း အမြန်ဆုံး ပြည့်ဝအောင်မြင်ရပါကြောင်း ဆုမွန် အပေါင်း ထပ်တောင်းလိုက်ရပါသည် ။
ငြိမ်းချမ်း အေးမြ အမေ့အိမ်ရိပ်မှာ ချစ်သားသမီး များ စုစည်းစွာ နဲ့၊
သာယာ တိုးတက် နေရမဲ့ရက်များ ၊ မနှေးအမြန် ရောက်စေရန်လည်း ၊
၆.၆.၂၀၁၀ က မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး နောက်တနေ့ မှာ အဝေးမှ လှမ်းမြင်ခဲ့ရတဲ့အမေ့အိမ်အိုကြီး ၊ ပြုပြင်ဆဲ မှ ထပ်မံရပ်တန့်ထားခြင်းခံနေရတဲ့ မြင်ကွင်း အား ၊ရင်နင့်စွာ မှတ်တမ်းတင်ထားရင်း ၊ ၁၉.၆.၂၀၁၀ မှာကျရောက်သော အမေဒေါ်စု မွေးနေ့ အတွက် ဆုတောင်းလွှာ ..
:Khyl : at 6/19/2010 01:00:00 AM
ဖြစ်နေကြ မဟုတ်တာတွေ ဖြစ်တဲ့ အခါ ထူးဆန်းတယ် လို့ဆိုကြတယ် ။ ဒီလို ထူးဆန်းတာလေးတွေက သနားစရာ ဖြစ်ရတဲ့ အခါ ဖြစ်ရလေခြင်းရယ် လို့မှတ်ယူ ကြတယ် ။ ခုတခါ လည်း ဒီလို ဖြစ်ရလေခြင်း တွေကို ထပ်မံ စုစည်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
တရုပ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ အရှေ့ မြောက်ဖက်ပ်ိုင်း Liaoning ပြည်နယ်၊ Shenyang မြို့ ရှိ Shengjing ဆေးရုံ မှာ ၂၀၁၀ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ က တွေ့ ရတဲ့ အသက် ၆ နှစ်သားလေး တယောက် ဟာ၊ မွေးရာပါ ခြေချောင်းလက်ချောင်း စုစုပေါင် ၃၁ ချောင်း ပါရှိပြီး ၊ ခွဲစိပ် ကုသဖို့စီစဉ် စောင့်ဆိုင်း နေစဉ်က တွေ့ ရတဲ့ ပုံများ ပါ ။
သူ့ ရဲ့ညာဘက်လက်ချောင်းမှာ လက်မ အပွားလေး အပါအဝင် လက်ချောင်း ၈ ချောင်း နဲ့ဘယ်ဘက်မှာ လက်ချောင်း ၇ ချောင်း ရှိနေပါတယ် ။
ခြေချောင်းတွေဟာလည်း တဖက်ကို ၈ ချောင်းစီ ပါဝင်နေတာ မို့အားလုံးစုစုပေါင်း ၃၁ ချောင်းရှိပါတယ် ။ အရင်က ကမ္ဘာ့ စံချိန်တင်ထား ခဲ့ တာကတော့ ခြေချောင်း လက်ချောင်း စုစုပေါင်း ၂၅ ချောင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
အဲ့လို လက်ချောင်းခြေချောင်းအပို အပွားများထွက်နေခြင်းကို polydactyly လို့ ခေါ်ပြီး သူက autosomal dominant မျိုးရိုးဗီဇ ရောဂါ တမျိုးဖြစ်ပါတယ် ၊ တချို့ မှာ ကျတော့ လက်ချောင်းခြေချောင်းများ ပူးကပ်နေတတ်ကြပြီး syndactyly လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ဒီလို ပိုနေတာ၊ ပူးကပ်နေတာတွေကို ပလပ်စတစ်ဆာဂျရီ ခေါ် အနုစိပ် ခွဲစိပ်ကုသနိုင်ပါတယ် ။
ဒီနေရာမှ ရတဲ့ အကြောင်းအရာပါ ။
ဒီအောက်က ပုံ မှာတော့ ခွဲစိပ်ဆရာဝန်တဦး သူ ကိုယ်တိုင် အခွဲအစိပ်ခံရဖို့ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာ သူ့ ကို ခွဲစိပ်ပေးမဲ့သူမရှိတဲ့ အတွက် သူကိုယ်တိုင် လူနာ လုပ်ပြီး သူကိုယ်တိုင်ပဲ ဆရာဝန် လုပ်ကာ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်ပြန်လည် ခွဲစိပ် ကုသလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တခုပါပဲ ။ ဒီအကြောင်း က ၁၉၆၁ ခုနှစ် က ရုရှားနိုင်ငံ မှာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ ။
အသက် ၂၇ နှစ်ရှိတဲ့ခွဲစိပ်ဆရာဝန် Leonid Rogozov ဟာ ၁၉၅၉ ခုမှာ ဆရာဝန်ဘွဲ့ရရှိပြီး နောက် အန်တာတိက ဝင်ရိုးစွန်း လေ့လာရေး Novolazarevskaya station မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင် နေစဉ် ၊ ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၉ ရက် ရုရှားနိုင်ငံ ရဲ့ဆောင်းတွင်း ရာသီဥတုဆိုးဝါးနေတဲ့ တည မှာ သူ့ရဲ့ ဝမ်းဗိုက် ညာဘက် အောက်ပိုင်းမှာ ရုတ်တရက် နာကျင်လာပြီး အော့အန်ကာ အဖျားတက် လာပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သူ့ တကိုယ်လုံး နာကျင် နှုန်းနယ်နေပြီး လှုပ်ရှားဖို့အားအင်ချိနဲ့ လာပါတယ် ။ သူ့ ကိုယ်သူ ပြန်လည်စစ်ဆေးချက် အရာ အူအတက် ရုတ်တရက် ယောင်ယမ်းခြင်း(acute appendicitis ) လို့ရောဂါ အမည် တပ် နိုင်တဲ့ အတွက် အလျင်အမြန် ခွဲစိပ်ကုသမှု ခံယူဖို့လိုအပ်နေပါတယ် ။ သူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အရပ်မှာ ဆရာဝန်ရယ်လို့ သူတယောက်သာ ရှိပြီး ရာသီဥတုဟာလည်း အင်မတန်ဆိုးဝါးနေတာမို့သူ့ ကို၊ စိတ်ချရမဲ့ ဆေးရုံထိဟယ်လီကော်ပတာ နဲ့ သယ်ဆောင်သွားဖို့ အစီအစဉ် ကလည်း ဘယ်လို မှ မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ ဒါကြောင့်မို့မခွဲ မဖြစ် တဲ့ သူ့အခြေအနေအရ သူ့ကိုယ်သူ ပဲ ခွဲစိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။ သူ့ ကို အကူအညီ ပေးမဲ့ သူတွေ ထဲ မှာလည်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နားလည် ကျွမ်းကျင်သူ တဦးမှ ရှိ မနေတဲ့ အတွက် အင်ဂျင်နီယာ တဦး နဲ့ မိုးလေဝသ ပညာရှင် တဦးက သူ့ ခွဲစိပ်မှု ကို ကူညီ ခဲ့ပါတယ် ။
သူ့ ဗိုက်ပေါ် မှာ ထုံဆေး ထိုးကာ မှန်တစ်ချပ်တင်ပြီး သူ့ ကိုယ်သူ ခွဲစိတ်မှု ကို စခဲ့ပါတယ် ။ဝမ်းဗိုက် အရေပြား ပေါ်မှာ ဓါးနဲ့ ၁၂ စင်တီမီတာ အရှည်မျှ ခွဲလိုက်ပါတယ် ၊ နာရီဝက်လောက် အကြာမှာတော့ သူ့ မှာ အားအင်ကုန်ခမ်းလာ ပြီး နာကျင်မှုကြောင့် ရှော့ခ် ရလု နီးပါး ဖြစ်ခဲ့ ရလို့နားနေရပါသေးတယ် ။ ဒီနောက် အားမလျှော့ ပဲ ဆက်လက် ခွဲစိပ်ခဲ့ရာ မှာ စုစုပေါင်း ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ် အကြာမှာ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ် ။ ခွဲပြီး ၅ ရက် အကြာမှာ အဖျားကျပြီး ပုံမှန် အခြေအနေပြန်ရောက်လာကာ ၇ ရက် အကြာ မှာ အနာကျက်လို့ချုပ်ရိုးဖြေ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
တောင်ဝှေးလဲတာ ဖိုးသူတော် ကယ်နိုင်ပေမဲ့ ဖိုးသူတော် လဲတဲ့ အခါကျ တောင်ဝှေးက မကယ်နိုင် ဆိုသလို ပါပဲ ။ သူဟာ လူနာတွေ အများကြီးကို ခွဲစိတ်ကုသ အသက်ကယ်နေခဲ့ ပေမဲ့လည်း သူခွဲစိပ်ခံဖို့အချိန်မတော့ ကယ်မဲ့သူ မရှိ ခဲ့ ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မလျှော့ပဲ သတ္တိရှိရှိနဲ့ဒီလို ခက်ခက်ခဲခဲ ကိုယ်တိုင် ပြန်ခွဲစိပ်ကုသ နိုင်ခဲ့တာကြောင့် သူ့ ကို သူရဲကောင်း ဆရာဝန် ရယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားများက ဂုဏ်ပြု ခေါ်ဆို ခဲ့ကြပါတယ် ။
ဒီနေရာ မှ ရယူထားတဲ့ အကြောင်းအရာပါ ။
ဖြစ်ရလေခြင်း .... တွေကို ဆက်လက်ဖတ်လိုပါက ဒီနေရာတွေမှာ (၁) (၂) (၃) (၄) ရှိပါတယ်
:kiki : at 6/12/2010 11:00:00 PM
“ချာချာလည် မူးတယ် ..အရက်ကိုသောက်လို့စိတ်မှာ မူးခဲ့တယ် ”..။ ဒါကငယ်ငယ်က ကြားဖူးခဲ့တဲ့ မှတ်မိသလောက် တေးသွားလေး တပိုင်းတစ .. ပလေးဘွိုင်း သန်းနိုင် သီဆိုခဲ့တာ နဲ့ တူ ပါတယ် ။ တချို့ က မူးချင်လို့ငွေအကုန်ခံပြီး အရက် ကိုသောက်ကြတယ် ။ တချို့ ကျ မူးလွန်းလို့ဒုက္ခရောက်ကြတယ် ။ အရက်ကြောင့် မူးတာ မဟုတ်ပဲ ရောဂါကြောင့်မူးနေကြရတဲ့ သူတွေမတော့ ဒီလို မူးချင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တခါတခါ မူးလာပြီ ဆိုရင် နေလို့ထိုင်လို့မရလောက်အောင်ကို ခံစားကြရတာကိုး ။
ဒီလို ချာလပတ်လည်လောက်အောင် မူးကြတာကို Vertigo လို့ခေါ်ပါတယ် ။ ရိုးရိုးအရပ်စကားကတော့ ခေါင်းမူး တယ် (dizziness) ပဲ ပေါ့။ ဒီလို ရိုးရိုးခေါင်းမူးတာက လည်း အကြောင်းများစွာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ဥပမာ အနီးမီးယား သွေးအားနဲ ခြင်း ။ သွေးပေါင်ကျခြင်း ။ သွေးထဲမှ သကြားဓါတ် လျော့နည်းနေခြင်း ။အိပ်ရေးမဝခြင်း ။ အိပ်ဆေး သို့ မဟုတ် ဘာမီတွန် လို ဆေးများရဲ့ အာနိသင်ကြောင့် မူးခြင်း စသဖြင့် ရှိကြတယ်။
ခု ပြောမှာ က ချာလပတ်လည်မူးရခြင်း အကြောင်းပါ ။
ဒီလိုမူးခြင်း ဟာ လူ အယောက် တရာ မှာ ၅ ယောက်မျှ ဖြစ်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာ ပို အဖြစ်များပါတယ် ။ အသက်အရွယ် အားဖြင့်လည်း အသက်ကြီးသူတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
အမြင်အာရုံ ၊အကြားအာရုံတွေ အပါအဝင် ဦးနှောက် အာရုံကြော များ က လူတယောက်ရဲ့ဟန်ချက်ကို ညီမျှအောင် ထိန်းပေးထားပါတယ် ။ အာရုံကြောထဲမှာ ဖြတ်ကူးသွားတဲ့ ဓါတ်များ (neurotransmitters ) က လက်ဆင့်ကမ်း ပို့ ဆောင် ပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု အာရုံခံစားမှု တွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ဒီလို အမြင်အာရုံ ၊အကြားအာရုံကြောတွေ မှာ တစုံတခု ချို့ ယွင်း လာတဲ့အခါမှာ ဟန်ချက်မညီ ပဲ ချာလပတ်လည် မူးခြင်း ကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ် ။
အကြောင်းရင်းကို ၂ မျိုးခွဲထားပါတယ် ။
CNS (or) Systemic Vertigo ခေါ် ဗဟိုအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတွေကြောင့် ဖြစ်တာ နဲ့
Peripheral Vertigo ခေါ် အပြင်နယ်နိမိတ် အင်္ဂါအဖွဲ့ တွေကြောင့် ဖြစ်တာ ပါ ။
Peripheral Vertigo မှာ များသော အားဖြင့် ဖြစ်လေ့ရှိတာ တွေကတော့ -
- အနေအထား ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် မူးရခြင်း ( benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) - သူက အများဆုံး ဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းရင်းပါ ။
- မင်းနီးယားစ် ရောဂါ (Ménière's disease ) - ဒါလည်း အဖြစ် များပါတယ် ။
- အတွင်းနား ယောင်ယမ်းခြင်း ( Otitis media )
- နားအတွင်းရှိ အကြားအာရုံအင်္ဂါပြွန် ယောင်ယမ်းခြင်း( Acute labyrinthitis )
- နားအတွင်းရှိ အကြားအာရုံအင်္ဂါ အာရုံကြော ယောင်ယမ်းခြင်း (vestibular Neuronitis )
- နံပါတ် ၈ ဦးနှောက် အလယ်ဗဟို အာရုံကြော ချို့ ယွင်းချက် တမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ခြင်း ( ဥပမာ -နားအာရုံကြော အကြိတ် ၊ ဦးနှောက် အမြှေးပါးသွေးကြောဖေါင်းပွခြင်း ၊ ဦးနှောက် ကင်ဆာ အကြိတ် စသဖြင့် )
- နားကို အဆိပ်သင့်စေသော ဆေးဝါး အချို့ ကြောင့် ဖြစ်ခြင်း ( ဥပမာ - Streptomycin , Gentamycin ,
- ဦးခေါင်းရိုးကွဲအက် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရ ခြင်း ( skull fractures ) ။
- အချို့တုပ်ကွေးရောဂါ ၊ ရိုးရိုး နှာစေးချောင်းဆိုးခြင်း စတာ တွေ ကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
- တချို့ကတော့ ကားမူး ယာဉ်မူး ခြင်း ဖြစ်တဲ့ Motion sickness ကိုလည်း ဒီ အကြောင်းရင်းထဲ ထဲ့သွင်းထား ကြပါတယ် ။
CNS Vertigo ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ ထဲမှာ
- ဦးနှောက်အောက်ပိုင်းနဲ့ကြောရိုး သွေးလွှတ်ကြော စီးဆင်းမှု မလုံလောက်ခြင်း ( Vertebrobasilar Artery Insufficiency - VBI),- သွေးတိုး ၊ ဆီးချို ရှိသူများ ၊ သွေးအဆီဓါတ်များသူများ ၊ဆေးလိပ်သောက်သူများ မှာ အဖြစ်များပါတယ် ။ဒါ့အပြင် လည်ပင်းကျောရိုးကျည်းပေါင်းတက်သူများ (cervical spondylosis )၊ လည်ပင်းကျောရိုးဒါဏ်ရာရဖူးသူများ ၊ ယောင်ယမ်းဖူးသူများ မှာ Cervicogenic vertigo ခေါ်တဲ့ မူးဝေခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ထိုသူတွေ မှာ ဇက်ကျောတက်ပြီး မူးဝေခြင်း အပြင် ခေါင်းကိုက်လေ့ ရှိတတ်ပါတယ်။ တချို့ မှာ ဖြစ်တဲ့ဖက်မှ လက်များထုံကျဉ်နေတတ်ပါတယ် ။
-ဦးနှောက် အာရုံကြောများ မာခဲ ခြင်း (Multiple Sclerosis)
- ဦးနှောက်ကြီး (Cerebral cortex )၊ ဦးနှောက်ငယ် ( Cerebellum ) ၊ ဦးနှောက် ရိုးတံ( brain stem ) စသည် တို့ မှာ သွေးထွက်ခြင်း ၊ ပုပ်ခြင်း(Infarction ) ။
-ဦးနှောက် အာရုံကြော ပိုးတွယ် ခြင်း( CNS Infection )
- ဦးခေါင်းရိုး နောက်ဖက် အဆင့် အခွက်ထဲ မှာ အကြိတ် ဖြစ်ခြင်း ၊ ဦးနှောက် အကြိတ် ဖြစ်ခြင်း ( Posterior fossa tumor or other brain tumor )
အစရှိတာ တွေကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ ။
အဲ့ဒီ အခါ မျိုးမှာ စကားပြော လေးလံခြင်း (slurred speech ) ၊ အမြင် ၂ ထပ် ဖြစ်ခြင်း( double vision ) ၊ မျက်စိအိမ် ဘေးတိုက်လှုပ်နေခြင်း( nystagmus ) အစရှိတာ တွေကို တွေ့ ရပါမယ် ၊
မူးပုံ မူးနည်း ။
* မူးနောက်နောက်လေး မူးမယ် (Dizziness )
* အိုးထိန်းစက်လို ချာလပတ်လည် မူးမယ် (vertigo)
* ဦးနှောက်ထဲသွေးမလျှောက်တော့ပဲ မူးကနဲ မိုက်ကနဲ ခံစားရမယ် ( Light headedness )
* ဟန်ချက်မထိန်းနိူင် ဖြစ်မယ် ။( A loss of balance )
* အမြင်ဝေဝါး မယ် (Blurred vision)
* ပျို့ မယ် ၊ အန်မယ် ။( Nausea ၊ Vomiting )
ခံစားနေရတဲ့ လက္ခဏာ အရ ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး ၊ အတိအကျ စစ်ဆေးဖို့ကတော့ Electronystagmography (ENG) ၊videonystagmography (VNG). ၊Magnetic resonance imaging (MRI) အစရှိတဲ့ အထူးကု အထူးစက်ကိရိယာ များ နဲ့ စစ်ဆေးရမှာပါ ။ ကြားဖူးနားဝ ရှိအောင်လောက်ပဲ အမည် နာမ များ ကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ အများအားဖြင့် အကြား အာရုံ အနေနဲ့ ရော ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေ လို့ မရတာ တွေ လည်း ရှိပါတယ် ။ ဒီတော့ ဦးနှောက်အာရုံကြောအထူးကုတွေ နဲ့ နား အထူးကု တွေ က ဒီ လူနာ တယောက် ကို ဟိုဘက်လွှဲ လိုက် ဒီဘက်လွှဲ လိုက် နဲ့ပဲ နောက်ဆုံးတော့ အကြောင်းရင်း မသိ ဆိုတာ တွေ လည်း များပါတယ်။
ဘယ်လိုကုမယ် ၊ ဘယ်လိုသက်သာအောင်နေမယ် ။
ဒီရောဂါ က အမြစ်ပြတ်အောင် ကုလို့မလွယ် ပါဘူး ။မူးစေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းမြစ်ကို ရှာဖွေပြီး သက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းကို ကုသရမှာပါ ။ဒါ့အပြင် အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ရုတ်တရက် မူးလာတတ်တာမို့၊ ချာလပတ်လည် မူးတာ မကြာခဏ ဖြစ်လာရင် ၊ မော်တော်ယဉ် မောင်းနှင်တဲ့အခါ ၊ အန္တရာယ် ရှိတဲ့ စက်ကရိယာတွေ နဲ့ကိုင်တွယ် လုပ်ဆောင် နေရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အထူးသတိထားရပါမယ် ။ ရုတ်တရက် မူးလာတော့မယ်ဆိုရင် စက္ကန့်ပိုင်း အချိန်လေးမှာ ကြိုတင် အသိပေး သလိုမျိုး အမြင်အာရုံ အကြားအာရုံတွေ ပြောင်းလဲလာတတ်တာမို့သတိရှိနေရပါမယ် ။
-အဆင်ပြေမဲ့နေရာ လေဝင်လေထွက် ကောင်းတဲ့ နေရာမှာ လဲလျှောင်း အနားယူ ရပါမယ် ။
-Lorazepam (Ativan) စတဲ့ စိတ်ငြိမ်ဆေး ၊အိပ်ဆေး ၊ (Dramamine )အစရှိတဲ့ အမူးအအန်ပျောက်ဆေးတို့နဲ့ လတ်တလော သက်သာစေနိုင်ပါတယ် ။
- လိုအပ်နေတဲ့ Neurotransmitter များ ပြန်ဖြည့်ဆည်းပေးရပါမယ်။
- နားကို ထိခိုက်စေတဲ့ ဆေးဝါးများ သောက်သုံး နေပါက ရပ်တန့် ရပါမယ်။
- အခြား မူးစေတတ်တဲ့ အကြောင်းရင်း ၊ ဥပမာ သွေးအားအလွန်နဲခြင်း ။သွေးတိုးနေခြင်း၊ သွေးချိုဓါတ် အလွန်နဲနေခြင်း ဒါမှမဟုတ် တက်နေခြင်း များ ရှိ ၊ မရှိလည်း သတိပြုရပါမယ် ။အခြေအနေသိပ်မဆိုးပါက ခေတ္တခဏမျှ အနားယူနေလိုက်ရုံနဲ့သက်သာသွားနိုင်ပါတယ် ။ တကယ်လို့အဆက်မပြတ်အော့အန်ပြီး အလွန်မူးဝေနေပါက ဆေးခန်း ၊ဆေးရုံ များသို့သွားရောက်ပြီး စစ်ဆေး ကုသမှု ခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီလို ချာလပတ်လည် မူးဝေခြင်းမျိုး ဖြစ်လာရင် ဒါမှ မဟုတ် ကာကွယ်ရန် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေ့ လို့ပေးဝေလိုက်ပါတယ် ။ ဒီနည်းကို Epley maneuver ဒါမှမဟုတ် ( Epley's exercises) လို့ခေါ်ဆိုပါတယ် ။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်က ဒေါက်တာ Dr. John Epley ဆိုသူတွေ့ ရှိခဲ့တဲ့ နည်းပါ ။
(၁) ဦးဆုံး အနေနဲ့မတ်မတ်ထိုင်ပါ။
(၂) မူးဝေတဲ့ဘက် ( ဥပမာ နားအူတဲ့ လက္ခဏာ ပြတဲ့ဘက် ) သို့ဦးခေါင်းကို ၄၅ ဒီဂရီလှည့်ပြီးပက်လက် အနေအထား သို့ဖြေးဖြေးချင်း လှဲလျှောင်းလိုက်ပါ ။
(၃) ထို အနေအထား အတိုင်း ၅ မိနစ်ခန့်နားနေပါ ။(တချို့ ကတော့ ၂ မိနစ် ၊ ၃ မိနစ်ထိ နေစေပါတယ် ။)
(၄) ထို့ နောက် ဦးခေါင်းကို အခြားတဖက်သို့၉၀ ဒီဂရီ ပြည့်အောင် စောင်းလှည့်နေပါ။
(၅) ဤ အနေအထား အတိုင်း နောက် ၅ မိနစ်ခန့်နားနေပါ။
(၆) ထို့နောက် မျက်နှာပြုနေရာဖက်သို့ကိုယ်ခန္ဓာ ကို စောင်းလှည့်ပြီး အောက်သို့ စိုက်နေပါ ။( ခေါင်းငုံ့ အနေအထား နေပါ )
(၇) ဤ အနေအထား အတိုင်း နောက် ၅ မိနစ်ခန့်နားနေပါ ။
(၈) ထို့ နောက် ဖြေးညှင်းစွာ မတ်မတ် ပြန်ထိုင်ပါ ။စက္ကန့်၃၀ မျှ ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်နေပါ ။
အထက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းကို အစမှ အဆုံး ၃ ခါ ပြည့်အောင်လုပ်ပါ ။
အောက်မှာ နားလည် လွယ်ကူအောင် ဗီဒီယိုကလစ် ပြထားတဲ့ အတိုင်း လုပ်ကြည့် နိုင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ တော့ ဆင်တူယိုးမှား လေ့ကျင့်ခန်းများ တီထွင် လုပ်ဆောင်လာကြပေမဲ့ အခြေခံသဘောတရားကတော့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းက အိမ်မှာ အလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပြီး ငွေကုန်ကြေးကျလည်း မရှိတာမို့စမ်းသပ်ကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ် ။ စာရေးသူ အမေကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလို မူးတတ်တာမို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်းသက်သာလာတာ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ပါတယ် ။အမေကတော့ မနက် အိပ်ယာထစဉ် တကြိမ် ၊ ည အိပ်ယာ မဝင်ခင် တကြိမ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါတယ်။ တကြိမ်မှာ ၄ ခါ ၅ ခါလောက် လုပ်ပါတယ်။
မူးယစ်ခြင်းများမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။ အာရုံကြော ကြောင့် မူး ခြင်းကို ကုသ လို့ ရပေမဲ့ အာဏာယစ်မူးခြင်းကတော့ ကုရာနတ္တိ ဆေးမရှိ ဟု ထင်မိပါတယ်။
အထက်ပါ အကြောင်း အရာ များကို ဒီနေရာ များမှ ရယူထားပါတယ် ။
:kiki : at 6/08/2010 11:00:00 PM
လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ ၊ လို့ ရွတ်ဖတ် မေတ္တာပို့ လေ့ ရှိတယ် ။ သူများလှည့်စားတာတွေ မခံကြရအောင်လို့မေတ္တာပို့ နိုင်ကြပေမဲ့ ကိုယ့် ဦးနှောက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်လှည့်စား နေကြတာ ကိုတော့ ဘယ်လိုမှ မေတ္တာပို့ လို့မရဘူး လို့ ထင်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုများ အလှည့်စားခံနေရတာပါလည်း ။ မျက်စိ နဲ့ ဦးနှောက် ကို နောက်အောင် လုပ်ချင်ရင် ၊ အာရုံတွေ ထွေပြား လှည့်စား ချင်ရင် အပျင်းပြေလေး စမ်းကြည့်ကြရအောင်လား ...
Oxford University မှ စမ်းသပ်ချက်တခု အရ ၊ ခံစားနေရတဲ့ နာကျင်ခြင်းဝေဒနာ ကို သေးငယ် လျော့ပါးသွားအောင် လုပ်နိုင် ပါတယ် တဲ့ ၊ ( နာ မှာ ကြောက်သူများ အတွက် ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်ကြပါ ။ သတင်းကောင်းတခု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ထုတ်လုပ်သူတွေ ကတော့ သိပ် ကျေ နပ်မယ် မထင်ပါဘူး ) ။ နာကျင် ဒါဏ်ရာရနေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခု ကို ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း binoculars မှန်ဘီလူး ကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး ကြည့်ပါ ။ အဲ့ဒီအခါက မြင်ရတဲ့ အစိတ်အပိုင်း က ပိုမို ဝေးကွာသေးငယ် သွားတဲ့ အတွက် နာကျင်မှု ဝေဒနာ ခံစားနေရတာ လည်း သေးငယ်လျော့ပါးသွားတယ် လို့ထင်မိတတ်ပါတယ် ၊
အနီရောင် ကြက်တူရွေးလေးရဲ့မျက်စိနေရာက အဖြူစက်ကလေးကို စူးစိုက်ကြည့်ပြီး ၁ မှ ၂၀ ထိ စိတ်မှာ ခပ်ဖြေးဖြေးလေး ရေတွက်ပါ ။ ပြီးရင် အလယ်မှာ ရှိတဲ့ လှောင်အိမ် အလွတ် သို့ရွှေ့ ပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါ ၊။ စိမ်းပြာရောင် ကြက်တူရွေးလေးတကောင် လှောင်အိမ်ထဲမှာ ရောက်နေတာ တွေ့ ရမယ် ။
ဒီနည်းအတိုင်းပဲ အစိမ်းရောင် ကတ္တဝါ လေးရဲ့ မျက်စိနေရာ အဖြူစက်ကို စူးစိုက်ကြည့် ပြီး လှောင်အိမ်လွတ်ထဲ နေရာ ပြောင်းကြည့်တဲ့ အခါ ပန်းနုနီရောင် ကတ္တဝါလေး လှောင်အိမ်ထဲ ရောက်နေတာ တွေ့ ရမယ် ။ ( အဲ့ လို မတွေ့ ရတဲ့သူတွေ မျက်စိ အမြင်တခုခု ဖြစ်နေပြီ ထင်ပါရဲ့..း))
ဘာလို့ ဒီလို မြင်ရတာလည်း ။
ပုံရိပ်တခု ကို အချိန်တခု (များသောအားဖြင့် စက္ကန့်၃၀ လောက်မျှ ) စိုက်ကြည့် နေရင် မျက်စိ ထဲရှိတဲ့ အရောင်လက်ခံတဲ့ photoreceptors ခေါ် အချွန် နဲ့ ကန်တော့ ပုံ (rods and cones)အစိတ်အပိုင်း များဟာ ညောင်းညာလာတတ်ပြီး afterimage ခေါ် နောက်ထပ်ပုံရိပ်များဟာ ခေတ္တခဏ ဝေဝါးသွားတတ်ကြတယ် ။ အဲ့ဒီ အချိန်မှာ မျက်စိကို အဖြူ နောက်ခံ တနေရာ သို့ ရွှေ့ ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ ဒီမှုန်ဝါးဝါး ပုံရိပ်တွေဟာ ခဏမျှ ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်တယ် ။ နောက် ၁၀ စက္ကန့် မှ ၃၀ စက္ကန့် မျှ ကြာသွားတဲ့ အခါမတော့ ဒီညောင်းညာမှုတွေ ပြေပျောက်သွားလို့ဒီ afterimage များဟာလည်း အဖြူနောက်ခံ မှ ပျောက်သွားရ ခြင်းဖြစ်တယ်။ အနီရောင်ကို အာရုံစိုက်ကြည့်နေတာ ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ မြင်ကွင်းထဲမှာ ဘေးက အစိမ်းရောင် ပါ ရှိနေတာ မို့ဦးနှောက်က ဒီ စိမ်းရောင် ကိုပါ မှတ်သားမိခြင်းဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ပုံရိပ်တု မှာ စိမ်းပြာရောင် ဖျောဖျော့လေး မြင်ရသလို ဖြစ်တာပါ ။
ဒီပုံကတော့ တွေ့ ဘူးနေကြ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ အရင်က ရေရှုခရစ်တော် ပုံ နဲ့ တွေ့ ဖူးပါတယ် ၊ ဒီလူပုံကတော့ အမျိုးသားတယောက် ၊ ခပ်ချောချောပဲ ၊ ဘယ်သူလည်းတော့ မသိ ။ဟောလိဝုဒ် မင်းသားတဦးဦးဖြစ်မလားပဲ ၊ကြည့်ပုံကြည့်နည်းလည်း သိပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပါ ။ ရုပ်ပုံ အလယ်က ( + ) နေရာ ကို စက္ကန့် ၃၀ မျှ စူးစိုက်ကြည့် ပြီး ၊ အနီးနားရှိ ဗြောင် နံရံ တခုပေါ်သို့ရုတ်တရက် ရွှေ့ ပြောင်းကြည့်လိုက်ရင် အမျိုးသားတယောက်ဦးခေါင်းပိုင်းပုံအရိပ် အဖြူ အမဲ ကို မြင်ရပါမယ်
ဒီပုံကို ကြည့် တဲ့ အခါ ဘယ်လို မြင်ပါသလည်း ၊ ချာလပတ်လည်နေတဲ့ ဒီအမျိုးသမီင်္း ကို သေချာကြည့် ...သူ ဘယ်ဖက်ကို လှည့် နေတာပါလည်း ။ နာရီလက်တံ လည်ရာ အတိုင်းလား ။ နာရီလက်တံ နဲ့ ဆန့်ကျင်ရာ ဘက် အတိုင်းလား .... တချိန်မှာ နာရီလက်တံ လည်ရာ အတိုင်း လည် နေသလို နဲ့ တချိန်ကြတော့ ဆန့်ကျင်ဘက် လားရာ ကို လှည့်နေပြန်ရော ... (အများအားဖြင့်တော့ ၂ ဖက်စလုံး လည်တာ ကို မြင်ဖို့ ခက်တယ် တဲ့ ။
ဘာကြောင့် ဒီလိုမြင်ရတာလည်း ။
တကယ်ဆို ဒီင်္ပုံ က ချာလပတ် လည်နေတာ မဟုတ် ပဲ ရှေ့နောက်လှုပ်ရှား နေတဲ့ပုံရိပ်များသာ ဖြစ်ပြီး silhouette illusion ( အမြင်ယောင်မှားခြင်း ) သဘောတရား အရ ဦးနှောက်မှာ နှစ်ဖက်ကြွ ပုံရိပ် ( two-dimensional image) တွေကို မြင်ရလေ့ မရှိပဲ သုံးဖက်ကြွ ပုံရိပ် (3-D image ) အနေနဲ့သာ မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်က three-dimensional world မှာပဲ နေပျော်တယ် ထင်ပါရဲ့။( ကိုယ်တိုင်ကြည့်ဖြစ်တာ ကတော့ နာရီလက်တံ အတိုင်းပဲ တဖက်သတ်လည်နေတာပဲ ။ အကြာကြီးကြည့်တော့မှ တချက် ရပ်သွားပြီး ပြောင်းပြန် ဆက်လည်တာ ခဏလေးတွေ့ လိုက်မိတယ် ။ မိတ်ဆွေတို့ ရော ဘယ်လို တွေ့ မလည်း မသိ.. )။
ဒီပုံမှာပြထားသလို ညာခြေထောက်ကို ချိတ်ပြီးထိုင်ပြီး ညာခြေကျင်းဝတ်မှ စပြီး နာရီလက်တံ လားရာအတိုင်း ပတ်လည် လှုပ်နေပါ ။ အဲ့ဒီနောက် ညာလက် နဲ့ လေထဲ မှာ6ဂဏန်းကို ရေးကြည့်ပါ ၊ သင့်ရဲ့ ခြေထောက်ဟာ နဂို နာရီလက်တံအတိုင်း လည်ပတ်နေရာမှ ပြောင်းပြန် လိုက်လည် လာတာ ကို တွေ့ ရပါမယ်။(6ဂဏန်း ကို ပုံမှန်အတိုင်း အပေါ်ပိုင်းက စရေးရ မှာ နော် ၊ သဘောက နာရီလက်တံနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် လားရာ ပါ ပဲ )။
ဘာကြောင့် ဒီလို ဖြစ်ရတာလည်း ...
ဘယ်ဘက်ခြမ်း ဦးနှောက်ဟာ ညာဖက်ခြမ်း ကိုယ်ခန္ဓာ ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ကို ထိန်းချုပ်ပေးပြီး ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ rhythm and timing ဆိုတဲ့ စည်းချက်ညီညီ အချိန်ကိုက် လှုပ်ရှားမှု အတွက် တာဝန်ယူပေးပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ လားရာမတူတဲ့ လှုပ်ရှားမှု တွေကို တပြိုင် နက်တည်း ဖြစ်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင် ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ခြေထောက်က လှည့်တဲ့လားရာ နဲ့လက်က လှည့်တဲ့ လားရာ ၂ မျိုးတို့မတူညီ ရင် ဘယ်လိုမှ ဆက်လှည့်လို့မရတော့ပဲ ၊ လားရာတူအောင် အလိုလို ပြောင်းလဲ သွားရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Phantom sensations လို့ခေါ်တဲ့ အထိအတွေ့အာရုံထင်ယောင်မှားခြင်းကြောင့်ပါ ။ တချို့ လူတွေမှာ သူတို့ ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း တခုခု ( ဥပမာ ၊ ခြေ၊ လက်၊ သားမြတ် စတာ တွေ )ကို ခွဲစိပ် ဖြတ်တောက် ထုတ်လိုက် ပြီးပေမဲ့ သူတို့ မှာ ဒီ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဆက်လက်ရှိနေဆဲပဲ လို့ထင်ယောင် မှားတတ်ကြပါတယ် ။ ဗွီဒီယို ကလစ်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ၁၉၉၈ ခုနှစ်က အမေရိကန် မှ သိပ္ပံပညာရှင် နှစ်ဦးရဲ့စမ်းသပ်တွေ့ ရှိချက်တခုပါ ။ လက် အတုကို သူ့အရှေ့ မှာထား ၊ အစစ် ကို သူ မတွေ့ နိုင်အောင်ကာ ထားပြီး၊ ထပ်တူထပ်မျှရှိတဲ့ အထိအတွေ့သက်ရောက်မှု တခုခု ကို တပြိုင်တည်း ပေးကြည့်တဲ့ အခါ ဦးနှောက် က အတုကိုပါ သူ့ ပစ္စည်းအစစ်လို့လက်ခံသွားတာ ကို မြင်တွေ့ ရမှာ ပါ ။ ဒါကြောင့် သူ့ ကို အတု အစစ် ခွဲခြားခိုင်း တဲ့ အခါ သူ့ မျက်စိရှေ့ မှာ မြင်နေရတဲ့ အတု ကို ပဲ သူ့ ပစ္စည်းအစစ်လို့ထင်ယောင်မှား ဖြစ်ရတာပါ ။
( ဘဘဂျီးတွေလည်း ဒီလိုပဲ ထင်များ နေကြသလား မသိ ..မြင်မြင်သမျှ အရာအားလုံး သူ တို့ ဟာတွေချည်း ထင်နေတာ ..ခွင့်လွှတ်သင့်ပါတယ် နော် ..း))) )
မိမိကိုယ်တိုင်က သူတပါးလှည့်စားတာကို မခံချင်ပေမဲ့ ကိုယ့်ဦးနှောက်ရဲ့လှည့်စားမှု ကို တော့ မခံချင်လို့ မရ ၊ ခံနေကြရပါတယ် ဆိုတာ ကို နားလည် သဘောပေါက်နိုင်ကြပါစေ လို့ မျှော်လင့် မိပါတယ်။
အချက်အလက် နဲ့ ပုံများကို ဒီနေရာ မှ ရယူပါတယ် ။
:kiki : at 6/05/2010 01:00:00 AM